Canadian University of Dubai - Study e United Arab Emirates
Canadian University of Dubai Iinkcukacha
isifinyezo : ingetyisi
Zifumaneke : 2006
abafundi (nama.) : 5000
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa Canadian University of Dubai
Babhalise kwi Canadian University of Dubai
Canadian University Dubai, esakhiwa 2006, ibekwe entliziyweni Dubai. Nganye iinkqubo zethu zemfundo isekelwe Curriculum waseKhanada kunye nemigaqo yemfundo. Oku kunika abafundi ithuba ngemfundo waseKhanada ngexa kuhlonitshwa inkcubeko kunye neemfundiso United Arab Emirates. kunye ngaphezu 100 beentlanga ezahlukeneyo kubiza kwikhaya lethu University, abafundi zethu ekwakheni iibhlorho nkcubeko amazwekazi.
Injongo yethu kukuba ukuqhubela umfundi ngamnye phambili njengoko umfundi efanelekileyo yobomi nommi elungileyo yehlabathi. Ukuphumeza oku, kugxininiswa kungekhona nje impumelelo ezifundweni, kodwa nokubandakanyeka ozenza. ubomi bethu umfundi oludlamkileyo ibonelela into wonke, ukusuka ezemidlalo iikonsathi, neehambo ezahlukeneyo ngamazwe phakathi. Abafundi nabo inxaxheba iintlobo ezininzi ezahlukeneyo izinto zentlalo, kuquka zokunyusa loluntu, ukwakha iqela, kunye nothungelwano iziganeko.
Kukho izizathu ezininzi ukukhetha Canadian University Dubai ngenxa isidanga okanye onesidanga izifundo zakho, ke makhe ndinazise into kuyasahlula koontanga bethu:
1. ikharityhulam waseKhanada-esekelwe
Sinikezela imfundo esekelwe kwikharityhulam waseKhanada, ngokusinika nomgangatho eyaziwayo kumazwe kwaye nokuthembeka.
2. Olukhetho ukuba bapase Canada
Njengoko kwisango kwimfundo waseKhanada ephakamileyo, ungaqala isidanga zakho ngoko umtyiso ukugqibezela izifundo zakho uze izidanga ukusuka kwenye kumaziko ethu iqabane eKhanada.
Zonke iinkqubo zethu elamkelweyo UAE yoMphathiswa weMfundo: LeMicimbi eMfundo ePhakamileyo.
4. fakhalthi International
oyena ngamazwe banemfundo kakhulu nonefuthe entsimini yabo, ukuzisa iindlela ezintsha zokufundisa kunye neentanda abasuka kumhlaba wonke jikele.
5. Graduate nokuqesheka
Ekubeni imfundo esekelwe kumgaqo waseKhanada iziphumo zokufunda ezimiselweyo, abaphumelele mtyiso bayaqeshwa kakhulu kwimarike imisebenzi ngamazwe.
Sikwabonelela iishedyuli inkqubo bhetyebhetye - kwiiklasi ngorhatya nangeempelaveki ziyafumaneka zombini iinkqubo zesidanga kunye abanezidanga.
7. indawo Business-kwisithili
Sinento kwindawo iSan ekulungeleyo entliziyweni kwisithili ishishini Dubai ngayo, kunye imeko yezifundo zobugcisa kunye nezibonelelo zolonwabo.
Umetyiso eyunivesithi umfundi-lugxile, apho ixabiso impumelelo yomfundi ngaphezu kwayo yonke enye into.
9. amathuba Research
Centre yethu Uphando libonelela abafundi ithuba lokuzibandakanya nzulu olukwinkqanaba ngamazwe kwi-UAE.
10. abafundi ekuhlaleni ezahlukahlukeneyo
Sinento bume yokufunda ezahlukahlukeneyo ngokwenene, kunye nabafundi abavela kumazwe angaphezulu 100 beentlanga.
School of Architecture ne Interior Design
I-School of Architecture ne Interior Design inika iinkqubo ezimbini Bachelor; Bachelor of Science e Interior Design, kunye Bachelor of Architecture. Zombini degrees kule School kuthatha malunga 4-5 iminyaka, kwaye kwiminyaka emibini yokuqala yokufunda ezifanayo ngaphakathi esikolweni, ukuvumela abafundi ukuba kungabikho bungqingqwa yokutshintsha phakathi kweenkqubo ukuba zikhetha phambi kokuqala konyaka wesithathu.
School of Administration zoShishino
I-School of Business Administration inikezela iinkqubo ezintlanu, ezine apho iinkqubo ezine ngonyaka, ngezigaba phantsi Bachelor of Business Administration, neengcali engafani; Marketing, Management kwabaSebenzi, Accounting and Finance and E-Business. Omnye umhlobo degree e loRhwebo iyafumaneka njengenkqubo unyaka-2.
I-School of Engineering, Applied Science and Technology inikezela degrees ababini abaziingcali; Bachelor of Science ngo woThungelwano Engineering, kunye Bachelor of Computer kunye nokuThungelana nobuNjineli neTeknoloji.
I-School of Environment and Health Sciences inikeza degrees ezimbini ezinkulu ukuba kuqeqeshwe abantu ukuba imikhala kwaye nabakwaziyo Adam ukuya Masters zabo, iziqu ezikhona; Bachelor of Science kuLawulo Enviromental Health and Bachelor of Science in Management Health Organization.
I-School of Communication and Media Studies inika izifundo kwiinkalo ezintathu ezahlukeneyo, Journalism, unxibelelwano noluntu Advertising, ukuba ngoku kokugqibela, degrees ezintathu, ezimbini ngazo ziyafana umxholo kodwa mhlawumbi ziphunyezwe IsiNgesi okanye Arabic. I-Bachelor of Arts okukwiqondo Unxibelelwano ifumaneka kwi IsiNgesi okanye iilwimi Arabic mhlawumbi luza kongezwa kwixesha elizayo. I degree wesithathu Bachelor of Arts IsiNgesi uLwimi Translation.
Master of Administration zoShishino (MBA)
Master e Information Technology Management and Governance (MITGOV)
Uyafuna ukuxoxa Canadian University of Dubai ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Canadian University of Dubai kwi Map
iifoto: Canadian University of Dubai ezisemthethweni kwiFacebook
Canadian University of reviews Dubai
Dibanisa ukuxoxa of Canadian University of Dubai.